Ukuhamba kuka-Apple kutsha kubonakala kuqinisekisa ukubeka esweni iswekile kwi-Apple Watch | Ndisuka mac
Ukuhamba kuka-Apple kutsha kubonakala kuqinisekisa ukubeka esweni iswekile kwi-Apple Watch
UManuel Alonso | 08/05/2021 14:00 | Apple Watch
Siye sahlala ixesha elide kunye namahemuhemu malunga nokusebenza okutsha okuza kubandakanywa yi-Apple Watch elandelayo. Sithetha malunga nokubeka esweni iswekile. Ngolu lwazi lungentla Kwakubonakala kucacile ukuba la marhe ayenzulu. Ayisiyiyo kuphela imisebenzi yeenkampani zesithathu, ukuba ayizizo ezokuqhuba zika-Apple. Ngapha koko inyathelo lokugqibela olithathileyo Kubonakala ngathi iyakuqinisekisa ukuba siyakuba nayo le mitha intsha kwiwotshi.
Sithethile kaninzi malunga nokukwazi ukusebenza kweApple njengengcali yabucala. Ngaphandle kokuba ayinakunyanga, yenza izinto ezininzi eziluncedo kwimpilo yethu. Isithintela kwiingxaki zentliziyo, isinceda kwimeko yokuwa, sigcina ucoceko lwesandla ... njl. Into elandelayo iApple ifuna ukusinceda silawule amanqanaba eswekile yethu kwaye ibonakala ngathi imbi kakhulu.
Ayisiyiyo kuphela ngenxa yeendaba ezithi sele bevelele malunga nale teknoloji intsha, ukuba akunjalo kuba kufuneka sithathele ingqalelo ngoku iApple isungule uphando phakathi kwabasebenzisi I-Apple Watch kwaye ibabuza ukuba basebenzise nayiphi na i-app ukulandelela indlela abatya ngayo, amayeza, kunye namanqanaba eglucose egazini.
Umzobo wesaveyi kwabelwane ngayo ne9to5Mac ngumfundi waseBrazil, owayifumana kwi-imeyile yakhe. Olu phando lunecandelo elizinikezele kwiimpawu zempilo eziyeyona ndawo iphambili yokuthengisa yeApple Watch ukusukela oko yangeniswayo.
Ukulandela le mibuzo, iApple ikwabuza imibuzo malunga nokusetyenziswa kweqela lesithathu ukulawula idatha yezempilo. Olu phando lubonelela ngeendlela zokhetho ekusetyenzisweni kweqela lesithathu lokulandela umkhondo ekusebenzeni, ukulandelela imikhwa yokutya (kubandakanya i-hydration kunye nesondlo), kunye nokulawulwa kolunye ukhathalelo lwempilo (njengamayeza kunye nokujonga amanqanaba amandla) Iswekile yegazi).
Siyazi ukuba olu phando luye lwakhonza inkampani kwizihlandlo ezidlulileyo zokwenza izigqibo. Umzekelo ekususweni kwetshaja kwi-iPhone 12 entsha kunye nezinye izixhobo. Ke sinokuthi lo ngumthombo olungileyo kwaye unguye ngaphezulu kokulindelekile ukuba sinayo imitha yeswekile kwi-Apple Watch 7. Into esingayaziyo kukuba iya kuba sisoftware okanye uhlaziyo lwezixhobo zekhompyutha. Ndiyathemba ukuba izakuba yeyokuqala kwaye ke nathi sonke sinokuzuza kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ukuhamba kuka-Apple kutsha kubonakala kuqinisekisa ukubeka esweni iswekile kwi-Apple Watch
I-Apple Developer Academy ukuba ihlale kwiSakhiwo sokuqala sikaZwelonke saseDetroit
I-MacBook Air elandelayo, ngemibala eyahlukeneyo njengeMac entsha